A Wanderer's Notebook: မိုး
အို....မိုးဒေ၀ါ ... ရှစ်တိုင်းမှိုင်းဆင်ကာ
စာနာသင့်ပါရဲ့...... ငြိုးမာန်တော် ၀ံ့လိုက်ပါနဲ့...
ရွာ သင့်မှရွာ..... ။ ။
(မိုးဒေ၀ါ ပတ်ပျိုး - ရေး ~ ဒေါ်စောမြအေးကြည်)
လောကမှာ မိုး နဲ့သရက်ကို အစိုးမရခြင်း လက္ခဏာ အဖြစ်တင်စားခဲ့ ကြသည်။ သရက်သီးလေးတွေဟာ ချဉ်မလိုလိုနဲ့ချိုတတ်သလို ၊ ချိုမလိုလိုနဲ့လည်းချဉ်တတ်ကြတယ် တဲ့ ။ ထို့အတူမိုး ဟာရွာမလိုလိုနဲ့စဲတတ်သလို ၊ စဲမလိုလိုနဲ့လည်းသဲတတ်ပါတယ် ။
မိုးတကာ့ မိုးထဲမှာ စင်္ကာပူမိုးကတော့ အစိုးမရဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ခဏကနေသာသော်လည်း ခုတော့မိုးရွာချင်ရွာတတ်သည်။ မကြာခင်နေပြန်ပွင့် တတ်သည်ကလည်းမထူးဆန်း .... ။
နံနက်ကနေပွင့်သည် ။ တနင်္ဂနွေနေ့ပေမယ့်ကျောင်းသွားစရာရှိ လို့ သွားရမည်။ တစ်နေ့လုံးသာနေလိုက်သည့် နေ သည်အိမ်ပြန်ခါနီး နှစ်နာရီကျော်လောက်တွင် မိုးအုံ့၍ ကျသွားပြီ ။ကျောင်းနှင့်အိမ်က အတော်လေးလှမ်းတော့ကားပေါ်မှာပင် မိုးတွေသည်းသည်းမည်းမည်းရွာလာသည်။ မိုးသည်းလာတော့ဘစ်ကားလည်းအရှိန်လျော့၍ ဖြည်းဖြည်းပင်မောင်းတော့သည်။ ကားတွင်းမှလေအေးစက်ကြောင့် မှန်အငွေ့ရိုက်၍ အပြင်ကိုမမြင်ရ ၊ ကျွန်တော်သည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီလှစွာ အုံ့ဆိုင်းညို့မှိုင်းသောစိတ်နှင့် Phone ထဲမှာအသင့်ရှိသော မလှရွှေ၏ "မိုးဒေ၀ါ" ကိုနားထောင်ရန်ပြင်လိုက်သည်။ မကြာမီ မလှရွှေရဲ့ အသံ ၊ ဒေါ်စောမြအေးကြည်ရဲ့ စာသားများ ၊ အသံသိပ်မပြတ်သားသော ရှေးသီချင်းကြားတွင် မျောဝင်သွားလေပြီ ။ အို ကျွန်တော်မျက်ဝန်းများမှာလည်းမိုးတွေညို့နေပါပြီကော ........ ။
ရာသီဥတုဟာ လူ့ခံစားချက်ကို အဘယ်မျှလွှမ်းမိုး နိုင်ကြောင်း ဖတ်ဖူး ကြားဖူးခဲ့ပြီ။ ရော့ရှိုင်းယားရဲ့ရာသီဥတု ပြောင်းသွားရင် လေထန်ကုန်း ဟာအသက်မဲ့သွားလိမ့်မယ် ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတုတွေထဲမှာ မိုးရာသီဟာလွမ်းဖို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ ။ ဒါကြောင့်လည်းရှေးရေးသီချင်းတွေမှ စ၍ခုခေတ်ပေါ် ရှော့(ခ်) သီချင်းများတိုင် မိုး အကြောင်းရေးစပ်ကြဆဲ ။ ကျွန်တော်သိရသမျှမိုးဖွဲ့ များသည် အလွမ်း၌သန်ကြသည် ။ "ညှိုးရက်တဲ့ ဒေ၀ါဆွေနတ်ရှင်... ဪမိုးသက်လေနှင်...." နှင့် "မိုးကပြောတဲ့အလွမ်းဇာတ်လမ်း ကိုကြားချိန်မှာ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲလည်းမိုးတွေရွာလာတယ်" တို့၏ခံစားချက်အခြေခံမှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
လူတိုင်းတွင် မိုးနှင့်ပတ်သက်သော အမှတ်တရများရှိကြမည် ။ ငယ်ငယ်ကလည်း "မိုးရွာရင် မိုးရေချိုးမယ်...." ဆိုတာလေးကိုကလေး တိုင်းအော်ဆိုခဲ့ဖူး ပေလိမ့်မည်။ ငယ်ဘ၀၏အရိပ်များတွင်လည်း မိုးရာသီနိမိတ်ပုံများ ပါဝင်နေမည်မှာသေချာလှသည်....။
မိုးသည်းခဲသော်လည်း စဲပြီးတိုင်းမြေသင်းနံ့ လေးချန်တားပေးတတ် သော ငယ်ငယ်ကမွေးရပ်မြေ ။ မိုးကောင်းလှသော ကျွန်တော့်ရဲ့ ပြည်မြို့လေး ။ ငယ်ငယ်ကမိုးရွာတဲ့ ညနေတွေမှာ ကျောင်းလာကြို တတ်တဲ့အမေ ။ ကျွန်တော့်မိုးကာ အကျီင်္ပျောက် တိုင်းအော်တတ်တဲ့အမေ့ရဲ့ အသံ ။ မိုးရွာထဲစက်ဘီး မစီးတတ်လို့ သားအမိနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ပြန် ခဲ့ရတဲ့မိုးနေ့တစ်နေ့ ။ နောက်ပိုင်း မိုးရေထဲစက်ဘီး စီးပြန်လာရတတ်တဲ့ကျွန်တော့်ကို အမြဲစိတ်ပူစွာစောင့်နေတတ်တဲ့ အမေနဲ့အဘွား ။ မိုးရွာလေထန်တိုင်း အိမ်နောက်ကသရက်ပင်ကြီးလဲ၍ အိမ်ပိမ လားစိုးရိမ်၍ ရသမျှဘုရားစာတွေ ရွတ်တတ်တဲ့ အဘွား ။ မိုးသည်းတိုင်း အိမ်ရှေ့တံခါးနားတိုးကပ် ၀ပ်တတ်တဲ့ ခွေးကြီး "ငနီ" ။ မိုးစဲတိုင်း ပင်ခြေမှာပန်းတွေ ဖွေးဖွေးလှုပ် အောင်ကြွေတတ်တဲ့ ၀င်းထဲက ခရေပင် လေး ။ နောက်မိုးမှောင် မှောင် ကျူရှင်ညနေခင်းတွေမှာ စာအတူတူသင်ခဲ့ ကျက်ခဲ့ရ တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ။ "ဟဲ့..... ငါညနေမိုးရွာတာကိုကြိုက်တယ်.. အစ်ကို သိလား ။ မိုးရွာရင် ကျူရှင်ဆရာကလာချင်မှ လာမှာ လေ... " - လို့ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ချစ်ရသူ ၊ အတူကျောင်း ကနေ ကျူရှင်ကိုသွားခဲ့ ကြတဲ့မိုး ညနေ တွေ.............. ။ ။
ခုတော့ ဝေးမြေမှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထည်း ။ စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ၊ အပြုံးတွေဝေးရာမှာ ။ အတွေးထဲ ၊ အဆွေးထဲမှ ကျွန်တော်ဆင်းရမယ့် ဘစ်မှတ်တိုင်ရောက်ပြီ ။ "House" ဟုပြော နိုင်သော်လည်း "Home" လို့မဆိုနိုင် သောခဏနားခိုရာသို့ ပြန်ရောက် ပြီ။
ထီးဆောင်းသည့်တိုင်ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်မှာ မိုးစက်တွေ ၊ ဖိနပ်လည်းမိုးရေတွေနစ်နေပြီ ။ ထီးပေါ်မှာလည်း စိုစိုရွှဲ ။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာရော........................ ။
အပြင်မှာတော့ မိုးသည် တစ်စိမ့်စိမ့် စွေနေပေတော့သည်. ။ ။
ခုများ ဟို ဗပ္ဘုန်က... မာန်ဟုန်တော်ပျိုး ......
မိုးနတ်ဒေ၀ါ... ရွာရန်ရေးကိုလေး ....
တွေးချင့်လိုက်ပါ ...... "
( မလှရွှေ၏ "မိုးဒေ၀ါ" ကိုခံစားကြည့်ချင်ကြသူတွေ အတွက် ရှားရှားပါးပါးရထား တဲ့မူရင်း သီချင်းလေးကို တင်ပေးထားပါတယ် ။ ခံစားကြည့်ကြပါ။ )
Posted by Aung Phyoe at 17:02
Ur writting is quite nice! including urself ,ur mother & ur girlfriend :) hay.. I salute u that u can listen that kind of song in our age.
Hay Ma Tulip , there is the different between "Lover" and "Beloved". She is not my girlfriend .